जापानमा खरीद गर्न वा अनुभव दिनको लागि 8 उत्तम परम्परागत शिल्प! किंत्सुगी, कोकेसी, जापानी कागज ... - Best of Japan
जापानमा बुनाई = शटरस्टक
जापानमा खरीद गर्न वा अनुभव दिनको लागि 8 उत्तम परम्परागत शिल्प! किंत्सुगी, कोकेसी, जापानी कागज ...
यदि तपाइँ परम्परागत "मेड इन जापान" शिल्पहरू हेर्न वा खरीद गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाई जापानमा कहाँ जानुहुन्छ? यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई आठ अद्भुत परम्परागत शिल्प को लागु गर्न चाहान्छु। यो उदाहरणको लागि, किन्पाकु (सुनको पत्ती), किंत्सुगी मर्मत, कोकेसी पुतली, वागाशी, सुसुगी आदि हो। यदि तपाईं यी शिल्पहरूमध्ये कुनैमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, कृपया तल लेख र भिडियोहरूमा हेर्नुहोस्।
किंपाकु (सुनको पात)
वागाशी (पारम्परिक मिठाई)
वाशी (जापानी कागज)
इडो किरो (जापानी कटग्लास): ग्लास निर्माणको अनुभव
आइजोम (इंडिगो डाई)
जापानमा, त्यहाँ सुनको पात प्रयोग गरेर धेरै परम्परागत शिल्प उत्पादनहरू छन्। हुनशु शहर, कनाजावामा, सुनको पत्ती सहित मिठाइहरू पनि बेचिन्छन् = AdobeStock
यदि तपाईं कानाजावा जानुहुन्छ भने, तपाईं सुनको पात शिल्पहरू = AdobeStock खरीद गर्न सक्नुहुनेछ
सुन पन्नी पातलो रूपमा सुन विस्तार गरेर बनाइएको छ। भनिन्छ कि करीव १० वर्ग मिटर सुनको पात झण्डै १ घन सेंटीमिटर सुनको साथ बनाउन सकिन्छ।
१ Japan औं शताब्दीको उत्तरार्धमा जापानमा समुराईले झगडा गरिरहँदा प्रमुख सामुराई सेनापतिहरूले भवन, कटोरा, तरवार र सुनको पातलाई शक्तिको प्रतीकको रूपमा प्रयोग गरे। पछि, टोकियो, क्योटो, कनाजावा जस्ता शहरहरूमा सुनको पात प्रयोग गरेर शिल्पवर्क एकपछि अर्को बनाईयो। अहिले पनि, यी सुनका पातहरू प्रयोग गरेर शिल्पवर्कको उत्पादन कानाजावा शहरमा जारी छ।
कनाजावा शहर मध्य होन्शुमा जापान सागर छेउमा एक सुन्दर पारम्परिक शहर हो। यो पिल्ट उत्पादनको लागि उपयुक्त छ किनकि यो अन्य क्षेत्रहरूको तुलनामा वर्षभरमा उच्च आर्द्रता राखिन्छ।
कनाजावा शोरको प्रयोग गरेर शिल्पको उत्पादन गर्ने ठाउँ पनि हो। माथिको तस्वीरमा देखिएझैं गिल्ड्ड पाना प्राय: हल्लाको प्रयोग गरेर शिल्पमा लागु गरिन्छ। यदि तपाईं कानाजावाको सडकहरूमा हिंड्नुहुन्छ भने, तपाईं त्यस्ता सुन्दर शिल्पहरू देख्नुहुनेछ। यसबाहेक, कानाजावा मा, तपाईं सुनको पत्तीको साथ आईसक्रिम पनि खान सक्नुहुनेछ माथिको भिडियोमा देखिए जस्तो। कानाजावामा हामी मिठो र रक्सीमा सुनको पत्ती पनि थप्छौं। अवश्य पनि, तपाई कुनै समस्या बिना गिल्‍ट खान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं कानाजावा जानुहुन्छ भने, कृपया धेरै "सुनका उत्पादनहरू" खाउनुहोस्।
>> सुनको पातका विवरणहरूको लागि कृपया यस साइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्
क्र्याक बर्तन चिया कपको मर्मत = शटरस्टक
जापानमा, टुटेको सिरेमिक र यस्तै अन्य प्रकारको मर्मत गर्दा पनि सुन प्रयोग गरिएको छ। जब टुक्राहरू सँगै जोडिए, सुन आवाजको साथ प्रयोग गरियो। यस तरिकाले पुनर्स्थापित माटोको भाँडो सुनको बनाइएको छ। हामी यी टेक्नोलोजीहरू र शिल्पहरू "किंत्सुगी" वा "किंत्सुनागी" भन्छौं।
किंत्सुगीको लागि, मैले निम्न लेखमा पहिल्यै परिचय दिएँ, त्यसैले यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको लेख पनि हेर्नुहोस्।
परम्परा र आधुनिकता को सामंजस्य (१) परम्परा! गीशा, काबुकी, सेन्टो, इजाकाया, किंत्सुगी, जापानी तरवारहरू ...
जापान मा, धेरै परम्परागत पुरानो चीजहरु बाँकी छ। उदाहरण को लागी, तिनीहरू मन्दिर र मन्दिरहरू हुन्। वा तिनीहरू सुमो, केन्डो, जुडो, कराटे जस्ता प्रतियोगिताहरू हुन्। शहरहरूमा सार्वजनिक स्नान र पबहरू जस्तो अनौंठो सुविधाहरू छन्। थप रूपमा, त्यहाँ मानिसमा बिभिन्न परम्परागत नियमहरू छन् ...
यदि तपाईं किट्सुगीको स्टुडियोमा जान चाहानुहुन्छ भने निम्न स्टुडियो क्योटोमा छ, त्यसैले कृपया यदि तपाईंले कुनै आपत्ति राख्नुभएन भने कृपया तल आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्।
>> होटल कान्रामा किन्स्सुगी स्टुडियो RIUM
जापानी परम्परागत "Kokeshi পুতুল" को लोकप्रियता बढ्दो छ = AdobeStock
त्सुगारू कोकशी गुडिया संग्रहालय (कुरोइशी शहर, अओमोरी प्रान्त)
कोकशी एक काठको पुतली हो जुन तोहोकू क्षेत्रमा १ th औं शताब्दीमा बनेको थियो। माथिको तस्वीरमा देखिएझैं कोचेशी रूख काटेर बनाइएको हो। विगतमा यो एकदम सरल थियो, तर हालसालै पनि, धेरै राम्रा डिजाइनको कोचेसी पनि बढ्दैछ। तपाईले सायद कोचेसीलाई देख्नुहुनेछ देशभरि स्मारिका पसलहरूमा।
कोचेशीलाई पहिले तोहोकु जिल्लाको तातो वसन्त रिसोर्टमा स्मारिकाको रूपमा बेचिन्थ्यो। तातो वसन्तमा आएका किसानहरू आफ्ना बच्चाहरूको लागि किन्थे र घर गए। किसानले राम्रो फसल ल्याउनको लागि भाग्यशाली कोकिशरी किन्थे।
हालसालै, Kokeshi महिला बीच ध्यान आकर्षित गरिएको छ। कोठामा सजावटका लागि कोकिशी खरीद गर्ने महिलाहरूको संख्या बढेको छ। Kokeshi आधुनिक जीवन मा एक इंटीरियरको रूपमा विकसित गर्न गइरहेको छ।
यदि तपाईं कोचेशीको बारेमा बढि जान्न चाहानुहुन्छ भने तोहोकु क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ।
>> विवरणका लागि यस साइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्
जापानमा धेरै राम्रा मिठाईहरू छन्। क्योटो र अन्य ठाउँमा जापानी शैली मिठाईहरू बनाउनको लागि पाठ्यक्रमहरू = AdobeStock पनि राखिएको छ
१ th औं शताब्दीमा मिठाइहरू विदेशबाट आयात गरिएको हुनाले परम्परागत जापानी मिठाइहरू सामूहिक रूपमा जापानमा "वागाशी" कहलाइए। यसको मतलब "जापानी मिठाई" हो। यदि तपाईं जापानमा डिपार्टमेन्ट स्टोर वा शपिंग सेन्टर जस्ता केक पसलमा जानुहुन्छ भने, त्यहाँ अझै "वागाशी" को कुना छ।
जापानमा, हरी चिया पिएपछि वागाशी खाने चलन थियो। हरियो चिया कडू छ, त्यसैले हामीले मीठा वागाशी खाएर एक प्रकारको सद्भावको आनन्द उठायौं। किनभने त्यहाँ त्यस्तो पृष्ठभूमि छ, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि ग्रीन चिया सँगै पिउन जब तपाईं वाघाशी खानु। क्योटोमा धेरै स्टोरहरू छन् जहाँ तपाईं जापानी मिठाई र हरियो चियाको मजा लिन सक्नुहुन्छ।
वाग्शीका लागि उपस्थिति महत्वपूर्ण छ। जापानी मिठाईका शिल्पकारहरूले वसन्त, ग्रीष्म ,तु, शरद winterतु, र जाडो मौसममा परिवर्तन अनुसार वागाशीको सामग्री र डिजाइन परिवर्तन गर्दछ। जब हामी वागाशी देख्छौं, हामी theतुको परिवर्तन महसुस गर्छौं। र हामीले वागाशी खायौं र मौसमबाट रमाईलो गर्‍यौं।
जापानमा परम्परागत वागाशी विशेष गरी क्योटो, कनाजावा, म्यात्सुमा रहेको छ। किनकि हरेक शहर एक सुन्दर पारम्परिक शहर हो, कृपया शहर अन्वेषण गर्नुहोस् र वागाशी खाउनुहोस् र रमाईलो गर्नुहोस्।
>> वागाशीको विवरणहरूको लागि कृपया यस साइटलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्
जापानी कागज प्रयोग लालटेन नरम बत्ती दिन्छ = शटरस्टक
जब तपाईं जापानको स्मारिका पसलमा जानुहुन्छ, तपाईंले सुन्दर वाशी (जापानी कागज) बिक्रि भएको देख्नुहुनेछ। उत्पादन लागत साधारण कागजको भन्दा बढी भएकोले, वाशी आधुनिक युगदेखि कम लोकप्रिय भएको छ। यद्यपि, वाशीको अद्वितीय सौन्दर्य छ। वाशीसँग पनि पर्याप्त टिकाऊपन छ यो भन्न सकिन्छ कि यो १००० बर्ष भन्दा बढीमा चुक्ने छैन। कृपया जापानी कागज उठाउने प्रयास गर्नुहोस् जब तपाईं जापानी स्मारिका पसल वा स्टेशनरी स्टोर (Itoya, आदि Ginza मा आदि) द्वारा रोकिन्छ।
प्राचीन कालदेखि नै हामी वाशिलाई हाम्रो जीवनका विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्दै आएका छौं। उदाहरण को लागी, घर बनाउँदा जापानमा, वाशीलाई विन्डोमा सिसाको सट्टा राख्न सकिन्छ। त्यसो भए, हामी बाहिरबाट गोपनीयता राख्न सक्छौं। उही समयमा, हामी बाहिरको प्रकाश मध्यम रूपमा प्राप्त गर्न सक्दछौं।
सुत्ने कोठामा र अन्य, हामी वाशीले ढाकिएका ल्युमिनेरहरू प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसपछि ज्योति वाशी बाट जान्छ र कोमल हुन्छ। सम्पूर्ण कोठाको वातावरण पनि शान्त हुन्छ। तपाईंले माथिको फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ, वाशी प्रयोग गरेर लाइटिंग फिक्स्चरहरू घटनाहरूमा र यस्तै अरू पनि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तपाईं यी फर्निचरहरू ठूला फर्निचर स्टोरहरू र यस्तैमा हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
>> जापानी कागज को विवरण को लागी, कृपया यो साइट मा सन्दर्भ गर्नुहोस्
गिलास आधुनिक डिजाइन को सेट लोकप्रिय = AdobeStock हो
टोकियोमा एक प्रतिनिधि पारंपरिक शिल्प उत्पादनको रूपमा एदो किरोको भनिने काटे गिलास छ।
ईडो किरो एक धेरै राम्ररी सजाइएको गिलास उत्पादन हो जुन माथिको तस्वीरमा देखिएको छ। यो सजावट कुशल कारीगरहरू द्वारा म्यानुअल तरिकाले गरिन्छ। तिनीहरू गिलासलाई सानो पलिishingग मेशिनको बिरुद्द थिच्दछन् र धैर्यसाथ सजावट गर्छन्।
इडो किरोको १ th औं शताब्दीको पहिलो आधा देखि निर्माण गर्न सुरु भयो। जापानमा १ th औं शताब्दीको मध्यदेखि आएका विदेशीहरू एदो किरीकोको सुन्दरता देखेर छक्क परे। त्यस पछि, धेरै एडो किरोको उत्पादन र जापानमा निर्यात गरिएको थियो। यद्यपि, दोस्रो विश्वयुद्धमा हामीले धेरै शिल्पकर्मीहरू गुमाए पछि, केहि स्टुडियोले त्यसपछि ईडो किरिको बनाउन जारी राख्यो।
टोक्योमा तपाईले यस इडो किरोको बनाउने अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै कार्यशालाहरूले पर्यटकहरूलाई स्वीकार गरिरहेका छन्।
तल स्टुडियोको साइट हो। यद्यपि त्यहाँ केवल जापानी पृष्ठहरु छन्। यो कार्यशालाको लागि आवेदन दोस्रो साइटबाट गर्न सकिन्छ।
>> कियोहाइड ग्लास (ईडो किरोको स्टुडियो)
इंडिगो डाई, टोकुशिमा प्रान्तको कपडा
जापानमा, "इंडिगो डाई" लाई "आइजोम" भनिन्छ। यस देशमा इंडिगो रye्गाउने लुगाहरू विभिन्न ठाउँमा बनाइएको छ र धेरै पहिलेदेखि नै लोकप्रिय छ।
जापानमा, इंडिगो रye वास्तवमै सामान्य हुन्थ्यो। त्यसैले १ th औं शताब्दीमा जापान आएका विदेशीहरूले विभिन्न तरीकाले वर्णन गरे कि जापानीहरूले नीलो लुगा लगाउँदछन्। एक बेलायती रसायनशास्त्रीले जापानीहरूले लगाएको कपडाको रंग भनेका थिए "जापान निलो"। प्रख्यात उपन्यासकार लाफ्काडियो हर्नले वर्णन गरे "जापान रहस्यमय निलोले भरिएको देश हो"। यस परम्पराको आधारमा, जापानी राष्ट्रिय टोलीका वर्दीहरू जस्तै फुटबल र बेसबल प्राय: जापान ब्लू हुन्।
जापानीजहरू प्रायः इंडिगो लुगा लगाउँनुको कारण यो थियो कि यसलाई टोकुगावा शोगुनेट युगमा फेन्सी कलरको लुगा लगाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यस युगमा त्यहाँ कुनै युद्ध भएको थिएन, त्यसैले किसानहरू र कारीगरहरू आफ्नो काममा ध्यान दिन सक्थे। र कामका लागि उपयुक्त कपडा इंडिगो डाई सूती कपडा थियो। तिनीहरू गाढा इंडिगो लुगा लगाउँदछन् ताकि तिनीहरू माटोले मैला भए पनि उनीहरूले देख्न सक्तैनन्। यसैबीच, सामुराईले पनि फेन्सिicing अभ्यास गर्ने बेला इंडिगो रye्गाउने लुगा लगाउँदछ। आधुनिक जापानीहरु पनि इंडिगो मन पराउँछन्। इंडिगो रye एक अर्थमा जापानको जीवनको प्रतीक हो।
यदि तपाईं टोकियोमा जापानी परम्परागत इंडिगो डाईको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया तलको साइटमा सन्दर्भ गर्नुहोस्। तपाईं वास्तवमा इंडिगो रye्गको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
ओशिमा त्सुमुगी धेरै उच्च वर्ग फेब्रिक = एडोबस्टकको रूपमा परिचित छन्
यदि म परम्परागत जापानी शिल्प बीचमा एउटा एकदमै विस्तृत कला टुक्राँटाहरूको मात्र चयन गर्छु भने, म सुसुगी छान्छु। Tsumugi रेशम कपडा को एक प्रकार हो। त्यो रेशमी कपडाले बनेको किमोनोका लागि हामी यसलाई "सुसुगी" भन्छौं। यो धेरै महँगो छ।
म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछ "ओशिमा त्सुमुगी" जुन यहाँ विशेष गरी विस्तृत छ। ओशिमा त्सुमुगी कागोशिमा प्रान्तको अमली ओशिमा इल्यान्डमा प्राचीन कालदेखि बनेको सुसुगी हो। यसको निर्माण विधिको बारेमा छोटकरीमा व्याख्या गर्न गाह्रो छ। कपडा रंग्दा, माथिको फिल्ममा देखाइए जस्तै, एक निश्चित थोरैमा एउटा धाई रंगाउनुहोस्। जब शिल्पकारले यी थ्रेडहरू बुन्छन्, त्यहाँ एक सुन्दर बान्की जन्मन्छ। शिल्पकारहरूले ध्यानपूर्वक अविश्वसनीय विस्तृत कार्य दोहोर्याउँछन् र कपडाको निर्माण गर्दछन्।
>> ओशिमा त्सुमुगीको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटमा हेर्नुहोस्
फोटोहरू: कानाजावामा सुनका संस्कृति
कनाजावा: अति सुन्दर पारम्परिक संस्कृति सहित एक प्राचीन शहर
जापानी Familyship! परम्परागत मानव सम्बन्ध धेरै परिवर्तन भएको छ
सिफारिश गरिएको जापानी स्थानीय साइट! पश्चिम जापान (चुगोकु, शिकोकू, क्युशु, ओकिनावा)
जापान मा यात्रा को लागी १० सर्वश्रेष्ठ यात्रा कार्यक्रम! टोक्यो, माउंट फुजी, क्योटो, होक्काइडो ...